AHRN Sagaing Project sites and Covid-19 Donation – AHRN-Myanmar
AHRN Sagaing Project sites and Covid-19 Donation
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိ AHRN စီမံကိန်းဌာနများဖြစ်သည့် (တမူး၊ ခန်းပါတ်၊ နန့်တော၊ မော်လိုက်) တို့သည့် Covid-19 (ကိုဗစ်-၁၉) ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် အသုံးပြုရန်အတွက် တမူး၊ ခန်းပါတ်၊ နန့်တော၊ မော်လိုက် တို့တွင်ရှိသော တိုက်နယ်ဆရာဝန်၊ မြို့နယ်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူး၊ ခရိုင်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး အသီးသီးအား လှူဒါန်း ခဲ့ကြသည်ကို ဂုဏ်ယူစွာဖြင့်တင်ပြအပ်ပါသည်။ Sharing is Caring!!
AHRN project sites in Sagaing Region (Kalay, Tamu, Kan Phat, Nant Taw, Mawleik) supported withagenerous donation the respective Station Medical Officer, Township Medical Officer, District Medical Officer in their areas in their fight against Covid-19. Sharing is Caring!!